Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 494019 times)
« Reply #350 on: June 09, 2011, 10:41:05 AM »
`၁၇၇၅ ခုနှစ်က ပက်ထရစ်ဟင်နရီ ကပြောခဲ့တာပါ´
နောက်တစ်ကြိမ်တိတ်ဆိတ်နေပြီး ခြွင်းချက်အဖြစ် မာတင့်ထံမှတုန့်ပြန်သံထွက်ပေါ်လာသည်။
`၁၈၆၃ ခုနှစ်က အေဗရာဟင်လင်းကွန်းကပြောခဲ့ပါတယ်။´
`စာသင်သားတွေမရှက်ကြဘူးလား။ငါတို့တိုင်းပြည်မှာ လူသစ်ဖြစ်နေတဲ့မာတင်က ငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ရာဇ၀င်ကို မင်းတို့ထက်ပိုသိနေပါလား။´
`၁၉၉၁ ခုနှစ်က ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က ဂျော့ဘွတ်ရ်ှကိုပြောခဲ့တာပါ။
ထိုအခါ ဒေါသဖြစ်နေသောကျောင်းသားတစ်ယောက်က အော်ပြောလိုက်သည်။
`၁၉၉၇ ခုနှစ်က မော်နီကာလူးဝင်စကီးကို ဘီလ်ကလင်တန်ကပြောခဲ့တာပါ´
`၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ ချန်ဒရာလူစီ ကို ဂယ်ရီကန်ဒစ် ပြောခဲ့တာပါ။´
`အို ငါတို့အခုမှ အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ပြီ´
`၂၀၀၃ ခုနှစ်က ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ကပြောခဲ့တာပါ´
« Reply #351 on: June 09, 2011, 10:45:44 AM »
မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချုပ်စဉ်တုန်းကပေါ့။မြန်မာစာပေကို အရမ်း
မြန်မာစကားလုံးတွေထဲကမှ လုံ့လ ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမှအထူးနှစ်သက်ပါသတဲ့။ဒါပေမယ့်
အဲဒီ့ခေတ်က လုံ့လ ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို ဒီလို(လုံ့လ)လို့မရေးဘဲဒီလို(လုံလ္လ)လို့ရေးပါသတဲ့။
အတွက် လြ--ွတ် လို့ခေါ်တယ်ဗျ။
ဒီလိုနဲ့အရေးပိုင်မင်းကြီးက တောရွာတစ်ရွာကို စစ်ဆေးစရာရှိတာနဲ့ရောက်လာပါရော။
« Reply #352 on: June 09, 2011, 10:47:24 AM »
တစ်နေ့မှာ အဘွားတစ်ယောက်ဟာ ကုန်စုံဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ အိမ်က သူ့ခွေးလေး အတွက် ခွေးစာသွားဝယ်ပါတယ်။ ခွေးစာဝယ်ပြီး ပိုက်ဆံရှင်းမယ်လုပ်တော့ ကောင်တာက
ငွေကိုင် မိန်းကလေးက ..
” ကျွန်မတို့ဆိုင်မှာ ခွေးစာဝယ်မယ်ဆိုရင် အဘွားရဲ့ခွေးကို ပြနိုင်မှ ရောင်းပေးလို့ရပါမယ် ” လို့ ပြောတယ်။
ဒါနဲ့ အဘွားလည်း အိမ်ပြန်ပြီး အိမ်က သူ့ခွေးကိုယူလာခဲ့ပါမှ ခွေးစာဝယ်ယူခွင့်ရသွားပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့မှာလည်း အဘွားက အဲ့ဒီဆိုင်မှာပဲ သူ့အိမ်က ပူစီလေးအတွက် ကြောင်စာ လာဝယ်ပြန်ပါတယ်။ဒီအခါမှာလည်း ကောင်တာက ငွေကိုင် မိန်းကလေးက မနေ့ကလို အလားတူ
ပဲ… ” ကျွန်မတို့ဆိုင်မှာ ကြောင်စာဝယ်မယ်ဆိုရင် အဘွားရဲ့ကြောင်ကို
ပြနိုင်မှ ရောင်းပေး လို့ရပါ့မယ် ” လို့ ပြောပြန်တယ်။
အဘွားလည်း ဒီမိန်းကလေး တယ်ရစ်ပါလားလို့တောင် မစဉ်းစားတော့ပဲ အိမ်ပြန်ပြီး သူ့ကြောင်မလေးကို ခေါ်ယူလာပြပါတယ်။ ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး အဘွားလည်း ကြောင်စာ ၀ယ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။
တတိယနေ့မှာ အဘွားဟာ ကုန်စုံဆိုင်လေးကို ထပ်မံရောက်ရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ အဘွားလက်ထဲမှာ ကဒ်ထူပုံးငယ်လေး တစ်ခု ပါလာ ပါတယ်။ အဘွားက ကောင်တာက ငွေကိုင်
မိန်းကလေးဆီ တန်းသွားလိုက်တယ်။ နောက်.. သူ့ကောင်တာရှေ့မှာရပ်လျှက်က လက်ထဲက
ကဒ်ထူပုံး လေးကို ဆန့်တန်းပေးရင်း…
” ငါ့မြေး.. အထဲကို လက်ကလေးနှိုက် စမ်းကြည့်လိုက်စမ်း” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ မိန်းကလေး လဲ သူလက်ကလေးဆန့်တန်းလို့ ပုံးထဲ နှိုက်ကြည့် လိုက်တော့
ပူနွေးပြီး နူးညံ့နေတဲ့ အတွေ့ အထိကို သူလက်ဖျားလေးတွေမှာ
” အဘွားကို အိမ်သာသုံး စက္ကူ တစ်လိပ်လောက်ရောင်းပါကွယ် ” ..တဲ့။...
« Reply #353 on: June 09, 2011, 10:50:17 AM »
ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် ဆရာမတစ်ဦးကို တိတ်တခိုး နှစ်သက်စွဲလမ်းနေမိသည်။ တစ်နေ့တွင် အရဲစွန့်ပြီး ဆရာမကို ချစ်ကြိုက်ကြောင်း ရင်ဖွင့်ခဲ့သည်။ ဆရာမက ကျောင်းသားနှင့် ဆရာမှာ မချစ်သင့်ကြောင်း၊ မယူသင့်ကြောင်း အမျိုးမျိုးပြောဆိုဆုံးမခဲ့သော်လည်း ကျောင်းသားက အချစ်တွင် အသက်အရွယ်၊ ရာထူးဂုဏ်သိက္ခာ မခွဲခြားကြောင်းပြောပြီး တစ်ဇွတ်ထိုး ရှေ့တိုးခဲ့သည်။
ဆရာမက မတတ်တာသည့်အဆုံး မင်းလို ကလေးကို ငါမချစ်နိုင်ဘူးဟူသည့်သဘောဖြင့် “ဆရာမ ကလေးမလိုချင်ဘူး” ဟုပြောလိုက်ရာ ကျောင်းသားပြန်ပြောလိုက်သည်မှာက “ကလေးမရအောင် ကျွန်တော်သတိထားပြီး လုပ်ပါ့မယ်” ဟူတည်း။
« Reply #354 on: June 09, 2011, 10:59:23 AM »
မိန်းမ ။ ။ ရှင် သောက်နေပြန်ပိလား ။
ယောက်ကျား။ ။ ဘာလဲ မင်းက အိမ်မျာဘဲ သောက်ရတဲ့ စည်းကမ်းကနေ နောက်တဆင့် မသောက်ရတဲ့တဆင့် တက်မလို့ လား။
မိန်းမ။ ။ မဟုတ်ပါဘူး မနေ့က ဟိုဘက်အိမ်က ကောင်မလေ သူ့ ယောက်ကျား သောက်တဲ့အရက်ပုလင်းခွံတွေရောင်းတာ ၄၀ တောင်ရတယ် ကျွန်မ ရှင့် အရက်ပုလင်းရောင်းတာ ၂၀ ဘဲရတာ ဘယ်လောက်မျက်နှာငယ်ရလဲ ဟွန်း
ယောက်ကျား ။ ။ ဟိုက်
« Reply #355 on: June 09, 2011, 11:42:09 AM »
မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည် လမ်းလျှောက်ရင်း သစ်သားနတ်ရုပ် တစ်ရုပ် ကောက်ရခဲ့သည်။
အရုပ်။ ။ဟေ့ ကလေးမ နင်ကငါ့ကို ကောင်းကောင်းထားတယ်။ငါနင့်ကို မ
မယ် 935 ထိုးဟဲ့။
ကောင်မလေးက ရှိသမျှစည်းစိမ် တစ်ဝက်ကို ရောင်းချပြီး ထိုး၏။
အရုပ်။ ။ဟေ့ ကလေးမ နင်ကံမကောင်းလို့မထွက်တာဟ။ဒီတစ်ခါအပိုင်ပဲ
ပေးမယ် 831 ထိုးဟဲ့။
ကောင်မလေးက ကျန်သောစည်းစိမ်တစ်ဝက်နှင့် ထိုးလိုက်ပြန်သည်။
ကောင်မလေးက ဒေါသထွက်ပြီး အရုပ်ကိုမီးရှို့လိုက်သည်။
အရုပ်။ ။ကောင်မလေး နင် ငါ့ကိုမီးရှို့တယ်ပေါ့။ရပါတယ်။
« Reply #356 on: June 09, 2011, 11:48:21 AM »
‘‘ကဲကဲ ထိုင်ပါဦး... မေးစရာလေးရှိလို့ ‘‘
မင်းအမြဲ သင်္ဘောစီး ခရီးသွားနေပြီး ခုထိရေမကူးတတ်သေးဘူးလား။’
အဖြေ ။ ။‘‘ ခင်ဗျားရော
အမြဲလေယာဉ်ပျံစီး ခရီးသွားနေပြီး ခုထိ မပျံတတ်သေးဘူးလား။’’
« Reply #357 on: June 09, 2011, 11:52:41 AM »
လို့ ခံယူတားကြတဲ့သူတွေစုပြီး(ဆိုရှယ်နက်ဝပ်ခ်)လို့့ခေါ်တဲ့ဟက်ကာဖိုရမ်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာကတော့မိတ်ဆွေတို့ သိတဲ့အတိုင်းဘဲ။ဘယ်ဟာကိုဘယ်လိုဟက်။ဘယ်ဟာကိုဘယ်လိုပြောင်းနဲ့ 
ဟေ့ကောင်တွေအရူးတွေမင်းတို့ ကိုကြည့်မရဘူးဘာတော်တာလည်း။ဘာတတ်တလည်း။ဘာမှအသုံးမကျကြဘူး။ဘာမှအရည်အချင်းမရှိဘဲနဲ့ ဆရာလုပ်နေကြတယ်။
« Reply #358 on: June 09, 2011, 12:31:57 PM »
တစ်ခါက ပင်လယ်ခရီးသွား သင်္ဘောတစ်စီး ပျက်ရာ
တစ်ယောက်နှင့်သူဧ။် အူတူတူ အတတ ခင်ပွန်းတို.သည် ဦးဦး မှော်ဆရာ နှင့်အတူ
ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်သို. ရောက်ရှိသွားလေသည်။ တစ်နေ. နံနက်ခင်းတွင် ဦးဦး
မှော်ဆရာ အုန်းပင်အမြင့်ကြီးပေါ်သို. တက်သွားပြီး အပေါ်ရောက်တဲ့ခါ
နေ.ခင်ကြောင်တောင် ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ ၊ မကောင်းပါဘူးဗျာ ၊
ဆင်းလာသောအခါ လင်ယောက်ျားဖြစ်သူက မေးသည် ။
ဘာတွေ ဖြစ်နေတာလဲ ၊ ကျုပ်တို.ဘာသာ အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်နေကြတာပဲ ၊ ဘာမှလဲ
" ဆောရီးဗျာ ၊ အုန်းပင်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါ အောက်ကို
လှမ်းကြည့်ရင် အဲဒီတိုင်းမြင်နေရလို.ပါ ကျနော်
ထိုသို.နှင့် နေ.စဉ် နံနက်တိုင်း ဦးဦး မှော်ဆရာ ထို
အုန်းပင်ပေါ်သို.တက်ပြီး အပေါ်သို.ရောက်တိုင်း ထိုသို.အော်ဟစ်နေလေသည် ။
နောက်ဆုံးတွင် လင်ယောက်ျားက သူကိုယ်တိုင်
ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ သို.နှင့်
အုန်းပင်ပေါ်သို. ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားပန်းစားတက်ရာ နောက်ဆုံး
အုန်းပင်ပေါ်သို.ရောက်သွားသည် ။ ထိုအခါကျမှ သူ.နှုတ်မှ
" ဟာ .. ဟို မှော်ဆရာ ပြောတာ
မှန်သားပဲ ၊ အောက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူပြောတဲ့
အတိုင်းပါပဲလား " ဟူ သတဲ့ ။
« Reply #359 on: June 09, 2011, 12:35:08 PM »
မိန်းမ။ ။ ရှင်ရုံးသွားတိုင်းဘာလို့ ကျမ ဓါတ်ပုံလေး ထည့်သွားတာလဲ။
ယောင်္ကျား။ ။ ငါပြဿနာတက်တိုင်း မင်းဓါတ်ပုံလေး ထုတ်ထုတ်ကြည့်တာပေါ့။ ပြီးရင် ပြဿနာတွေက သူ့အလိုလို ပြန်ပျောက်သွားရောကွ။
မိန်းမ။ ။ တွေ့တယ်မလား ကျနော်မ ရှင့်အပေါ်မှာ ဘယ်လောက်အထိ စိုးမိုးနေတယ်ဆိုတာ။
ယောင်္ကျား။ ။မင်းပုံလေး ကြည့်ပြီးရင် ငါဘာသာ ဘာပြောလဲ မင်းသိလား။
မိန်းမ။ ။ ဘာလဲ ကျမ ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းလား။
ယောင်္ကျား။ ။ မင်းထက်ကြီးတဲ့ ပြဿနာ ဘာများရှိဦးမှာလဲ လို့ပေါ့ကွ။